Iwu 10 ka esi azaghachi nyocha na -adịghị mma n'ịntanetị | Martech Zone
Iwu 10 ka esi azaghachi nyocha na -adịghị mma n'ịntanetị
Sọnde, Septemba 19, 2021 Sọnde, Septemba 19, 2021 Douglas Karr
Ịme ahịa nwere ike ịbụ nnukwu ihe ịma aka. Ma ị na -enyere azụmahịa aka na mgbanwe dijitalụ ya, ebipụta ngwa mkpanaka, bụ ọrịre ahịa, ọ nwere ike bụrụ na ị gaghị emezu ihe ndị ahịa gị tụrụ anya ya otu ụbọchị. Na ụwa mmadụ na ọha ọkwa na nyocha, Ohere gị nke ị nweta ụfọdụ nyocha na -adịghị mma n'ịntanetị dị nso.
Dị ka ọha dị ka ọkwa na -adịghị mma ma ọ bụ nyocha na -adịghị mma nwere ike ịbụ, ọ dị mkpa ka ị mata na nzaghachi gị maka ọkwa ma ọ bụ nyocha ahụ adịghị mkpa dịkwa mkpa - ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa karịa. Ezi nzaghachi maka nyocha na -adịghị mma nwere ike ịkwalite nkwanye ùgwù na ntụkwasị obi maka azụmahịa gị. Ndị ọchụnta ego ọgbara ọhụrụ na ndị na -azụ ahịa ghọtara na mmekọrịta ọ bụla nke azụmahịa agaghị abụ nke zuru oke…
Ana m ede edemede a dabere na ahụmịhe m na akụkọ ihe mere eme na otu m siri hụ ka azụmaahịa meriri nyocha na -adịghị mma - Agaghị m ehota ọmụmụ ma ọ bụ data n'ihi na echere m na azụmahịa ọ bụla nwere ọdịbendị na usoro nke na -agaghị adị mgbe niile. nabatara na nchịkọta ọnụ ọgụgụ. Nke a bụ ndepụta ndụmọdụ m na usoro maka ịzaghachi nyocha na -adịghị mma.
Ị ga -azaghachi… Ozugbo - Nzaghachi ozugbo dị mkpa iji nye ndị ahịa na azụmaahịa ndị ọzọ echiche na ị na -ege ntị na ị na -eche banyere ya. Nke ahụ apụtaghị na ị kwesịrị ịbịaru nkwubi okwu. Mgbe ụfọdụ ịzaghachi bụ naanị ịsị na ị nụla mkpesa ma na -enyocha ọnọdụ yana otu esi edozi ya.
Nwee ọmịiko - Rịba ama etu m sịghị '' gosi ọmịiko ''? Nke a abụghị oge ime ka à ga -asị na ị na -eche, ọ bụ oge ichebara echiche n'ezie banyere echiche onye ahịa ma ọ bụ onye ahịa na -eche na ha nwetara ọrụ adịghị mma. Mgbe ị na -azaghachi onye a, mee ka à ga -asị na ha enwetabeghị ụbọchị kacha njọ na ndụ ha. Enwere m onye ndu gwara m n'otu oge na oge ọ bụla ya na onye ọrụ na -enwe mkparịta ụka na -echegbu onwe ya na ọ na -eme ka onye ọrụ ahụ nwụnahụrụ onye ezinụlọ. Echere m na nke ahụ bụkwa ndụmọdụ dị n'ịntanetị.
Nwee Ekele - Ọ bụ ezie na enwere ọnụ ọgụgụ pere mpe nke ndị nọ ebe ahụ bụ naanị troll na -enweghị obi ụtọ, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na -eme mkpesa n'ihu ọha n'ihi na ha na -eche maka otu i siri mesoo ha ma nwee olile anya na ị gaghị eme ya ndị ahịa ndị ọzọ n'ọdịnihu. Onye ahụ wepụtara oge dee banyere okwu dị na azụmaahịa gị nke nwere ike na -emetụta ọtụtụ ndị mmadụ bụ nzaghachi dị oke ọnụ maka gị iji meziwanye azụmahịa gị.
Listen - Ọ bụrụ na emezughị atụmanya, gee onye ahịa gị ntị nke ọma ka ị ga -esi meziwanye usoro ime gị. Ọ ga -eju gị anya na ọtụtụ ndị ahịa chọrọ naanị ịbụ gee ntị ka ha na -ekwu. Mgbe ụfọdụ naanị na -ajụ, "Olee otu anyị gaara esi mee nke ọma?" nwere ike ibute nzaghachi dị ịtụnanya maka azụmaahịa gị nke ga -eme ka afọ ju ndị ahịa afọ ojuju.
Bụrụ Eziokwu - Ọ bụghị ihe ọhụrụ ndị mmadụ imebiga ihe oke ókè mgbe ha hapụrụ nyocha na -adịghị mma. Mgbe ụfọdụ, ndị na -enyocha ịntanetị na -agha ụgha kpamkpam. Ọ dị mma ịnye nzaghachi eziokwu maka nyocha na -adịghị mma ma ọ bụrụhaala na ị zere ịwakpo onye nyocha na -akwụ ụgwọ niile. Ọ bụ ọnọdụ siri ike, mana ekwela ka okwu ụgha gbasara azụmahịa gị laa.
Chọta Mkpebi - Ịchọ mkpebi bụ ihe dị mkpa. Emere m nnukwu ego na onye na -enye ọrụ ụlọ afọ ole na ole gara aga na ọnọdụ niile bụ ọdachi. Mgbe m hapụsịrị ogologo nyocha na ntanetị nkọwa niile, onye nwe ụlọ ọrụ ahụ (onye na -amaghị maka ọnọdụ ahụ) bịakwutere m n'onwe m wee jụọ, "Olee otu anyị ga -esi mee nke a?". Ngwọta ahụ ezughị oke, mana m wepụrụ nyocha na -adịghị mma mgbe ụlọ ọrụ tinyechara oge na ume iji nwaa idozi ọnọdụ ahụ.
Were ya na -anọghị n'ịntanetị - Inwe arụmụka na -aga n'ihu na ntanetị ma ọ bụ ọbụlagodi site na email agaghị enyere aha azụmahịa gị aka. Ilu ochie nke anyị 'na -eto n'ihu ọha, ziri ezi na nzuzo' dị na ọnọdụ nyocha adịghị mma. Na -agba mbọ mgbe niile maka ohere ịgwa onye mmadụ okwu ka ha wee nụ nchegbu gị ma nwee ike hapụ ha ka ha kwupụta nkụda mmụọ ha. Ịgụ ederede anaghị enye ọkwa ọmịiko na nzaghachi. Ọ bụrụ na onye nyocha ahụ chọrọ ịnọgide na -akụ gị n'ịntanetị, ọ dị mma ịzaghachi na ọnụ ụzọ gị na -emeghe mgbe niile mana ịkwesịrị iwepụ ya na ntanetị.
Tinye ihu na nzaghachi gị - Ọ dịghị onye na -enwe mmasị nzaghachi / mado autoresponse nke nnukwu ụlọ ọrụ. Mgbe ị na -ede nzaghachi gị, tinye aha na ozi ịkpọtụrụ gị ka onye ahụ wee hụ na enwere onye dị adị nke ewerela ọrụ maka idozi ọnọdụ ahụ.
Dị Bọọ - Nzaghachi dị mkpirikpi enwere ike bụrụ nzaghachi kacha mma maka nyocha na -adịghị mma n'ịntanetị. Kelee onye ahụ, kweta okwu ahụ, rụọ ọrụ na mkpebi, ma nye ozi kọntaktị iji chụpụ mkpebi na -anọghị n'ịntanetị. Ọ dịghị mkpa idepụta paragraf na paragraf nke ọ nweghị onye ga -agụ ma ọ bụ baa uru.
Soro n'ịntanetị mgbe ọ dị mkpa - M na -ahụkarị nyocha na -adịghị mma n'ịntanetị gbasara ngwa mkpanaka nke na -ezo aka na chinchi ndị emeziri na ụdị ọdịnihu. Ọ dị oke mkpa ikwuputa n'ihu ọha na edozila esemokwu ahụ ma kelee onye kọọrọ ya. Nke a abụghị ikpe maka mkpebi onwe onye… naanị usoro ọha ma ọ bụ mgbanwe ngwaahịa nke doziri esemokwu maka ọtụtụ ndị ahịa. Onye nlele achọghị ka ị hụ ka ị na -ezipụta mkpebi ọnọdụ onwe ha n'ịntanetị dị ka ụzọ iji kwalite azụmahịa gị.
Onye ahịa anaghị adị mma mgbe niile
Onye ahịa adịghị mgbe niile ziri ezi. Echere m na nke ahụ bụ otu n'ime okwu kacha njọ. Enweela m ọtụtụ ndị ahịa na -akparị mmadụ na ndụ azụmahịa m. Ana m atụkwasị obi mgbe niile n'ihe gbasara ọnọdụ ndị a wee zere nzaghachi mmetụta uche ma ọ bụ ebubo. Karịsịa mgbe ọ bịara na ndị ọrụ m bụ ndị gafere oke karịa n'ịgbalị idozi ọnọdụ ahụ.
Ọ ga -akara m mma idobe ezigbo onye ọrụ karịa ịhapụ onye ahịa ọjọọ nke ghaara ụgha banyere otu ọnọdụ.
Otu ụlọ oriri na ọ Iụ Iụ mụ na ya na -arụkọ ọrụ nwere nyocha na -enyo enyo, enweghị aha, na -ekwu okwu banyere efere nke ha na -enyeghị. Ha zara n'ezie na nyocha ahụ mgbe ha na -ezere esemokwu ọ bụla na onye nyocha na ntanetị.
Ọ DỊGHỊ wakpo onye nyocha
Ejila ọgụ ma ọ bụ sie ọnwụ na onye nyocha gị na -agha ụgha ma ọ bụ soro onye na -enyocha ya nwee arụmụka n'ịntanetị. Ịza nzaghachi na-adịghị mma na enweghị nlebara anya bụ ụzọ siri ike iji lie aha azụmahịa gị dị ka azụmahịa na-ahụ n'anya, ọmịiko na ezi uche. Ọ dị mma ịgbachitere ụgha ụgha gbasara azụmahịa gị site na iji eziokwu… mana ọ dịghị mgbe, wakpo onye nyocha ma ọ bụ sie ọnwụ na ha ezighi ezi. Ịkpọ onye ahịa nke kwụrụ gị onye ụgha n'Ịntanet agaghị eme ka azụmahịa gị ka mma.
Ihe Nlereanya nke Nzaghachi Nyocha Na -adịghị Mma
Achọrọ m ịnye ụfọdụ ọmụmaatụ nzaghachi nyocha na -adịghị mma nke nwere ike inyere gị aka n'ịme nzaghachi kwesịrị ekwesị nke na -enyere gị aka imeziwanye aha gị n'ịntanetị. Lee ụfọdụ ọnọdụ:
Ntụle na -adịghị mma ị ga -achọ nyochakwu
[Aha], daalụ maka iwetara anyị nke a. Anyị na -eji nzaghachi ndị ahịa anyị akpọrọ ihe nke ukwuu ma na -achọkarị karịa ịtụ anya. Anyị na -enyocha okwu a na ndị ọrụ anyị ga -akpọtụrụ n'ime ụbọchị azụmaahịa abụọ na -abịa. Ọ ga -amasị anyị ịnụkwu banyere ọnọdụ a ma jiri nzaghachi gị kpọrọ ihe. Ọ ga -adị mma ma ọ bụrụ na anyị akpọtụrụ gị na ekwentị? Nwere onwe gị iduzi m ozi [Aha m] ma ọ bụ kpọọ ndọtị m [X] na [Nọmba ekwentị].
Nyocha na -adịghị mma na -amaghị ama
Daalụ maka iwetara anyị nke a. Anyị na -eji nzaghachi ndị ahịa anyị akpọrọ ihe nke ukwuu ma na -achọkarị karịa ịtụ anya. Ọ ga -amasị anyị ịnụ ka ị na -amụtakwu gbasara ọnọdụ a. Ọ ga -adị mma ma ọ bụrụ na anyị akpọtụrụ gị na ekwentị? Nwere onwe gị iduzi m ozi [Aha m] ma ọ bụ kpọọ ndọtị m [X] na [Nọmba ekwentị].
Ntụle na -adịghị mma nke ụgha
[Aha], anyị anaghị enye ngwaahịa ahụ. Biko ị nwere ike ịkpọtụrụ m [Aha m] ma ọ bụ kpọọ ndọtị m [X] na [Nọmba ekwentị] ka anyị nwee ike chọpụta ozi gbasara ọnọdụ a?
Ezi Nyocha Na -adịghị Mma
[Aha], daalụ maka iwetara anyị nke a. Anyị na -achọkarị ịgabiga atụmanya ndị ahịa na nke a yiri nnukwu ohere maka anyị ime ya. Anyị ga -achọ ịgwa gị okwu iji mee ka nke a dịrị gị ebe ọ bụ na azụmahịa gị dị anyị mkpa. Ọ ga -adị mma ma ọ bụrụ na anyị akpọtụrụ gị na ekwentị? Nwere onwe gị iduzi m ozi [Aha m] ma ọ bụ kpọọ ndọtị m [X] na [Nọmba ekwentị].
Onye nlele na -adịghị mma nke na -aga n'ihu
[Aha], ọ dị nwute, ruo mgbe anyị ga -agwa gị okwu iji nyochaa ọnọdụ a, anyị agaghị enwe ike idozi ọnọdụ ebe a. Biko zitere m ozi [Aha m] ma ọ bụ kpọọ ndọtị m [X] na [Nọmba ekwentị].
Usoro edozi site na nyocha na -adịghị mma
[Aha], daalụ nke ukwuu maka iwebata okwu a na ịnọnyere anyị iji dozie okwu a. Dị ka FYI nye onye ọ bụla na -agbaso okwu a n'ịntanetị, anyị agbanweela ngwaahịa / usoro anyị wee wepụ okwu a ka ọ bụrụ [ụbọchị].
Ọ dị mma ịkwụsị na nyocha na -adịghị mma
Mgbe ụfọdụ njikọ aka achụmnta ego anaghị arụpụta nke ọma. Ị nwere ike ịnwale ihe niile iji dozie nyocha na -adịghị mma yana ọ nwere ike ọ gaghị ebute ụdị mkpebi ọ bụla nke na -eme ka onye ahịa gbanwee usoro ma ọ bụ wepu nyocha ahụ. Ọ na -aga ime.
Ọ bụrụhaala na ndị na -azụ ahịa na azụmaahịa na -ahụ na ịmela ihe niile n'ike gị ịnwale ma dozie ọnọdụ butere nyocha na -adịghị mma, ha ga -enye gị uru nke obi abụọ.
Azịza kacha mma maka nyocha ndị na -adịghị mma bụ nyocha dị mma
Ọ bụrụ na azụmahịa gị na -alụ ọgụ nyocha ole na ole na -adịghị mma nke na -agaghị apụ, ọgwụgwọ kacha mma bụ ịrịọ ndị ahịa nwere obi ụtọ ma na -akwali ha ka ha nye gị nyocha na -enye ọ forụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na -azụ ahịa ga -awụlikwa elu na -agụ nyocha ndị na -adịghị mma (ana m eme ya), enweghị mgbagha ọ bụla na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nnukwu nyocha ga -emetụta echiche ha banyere aha gị.
Na, n'ezie, ịhụ nzaghachi echebara echiche na nyocha ọ bụla na -adịghị mma ebe ị nwara ị nweta mkpebi ga -enyere aka karịa!
Tags: otúnyocha na -adịghị mma n'ịntanetịnzaghachi nyocha na -adịghị mmanyocha ndị na-adịghị mmaNyocha banyere ntanetịNyocha